ANM (Association Nosy Malagasy). Namaly ny taratasiny ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena frantsay Jean-Luc Porcedo - Tout pour la restitution des îles malagasy
Namaly ny taratasy nalefan’ny Association Nosy Malagasy (ANM) tamin’ny 24 oktobra 2016 ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena frantsay tamin’ny alalan’Andriamatoa Jean-Luc PORCEDO.
Maneho fisaorana feno ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena sy ireo Solombavam-bahoaka frantsay ny ANM tamin’ny fanolorony tolo-kevitra amin’ny tokony hametrahana taratasy fangatahana fihaonana amin’ny Vaomieran’ny raharaham-bahiny eo anivon’ny Antenimieram-pirenena frantsay na eo anivon’ny Vondron’ny solombavam-bahoaka mpikambana amin’ny fifankatiavana frantsay sy malagasy momban’ny famerenana ny Nosy malagasy.
Nataonay izany taratasy fangatahana izany androany satria mihevitra izahay fa tsy ho ela dia hisy vaha-olana am-pilamina sy ao anatin’ny firahalahiana tanteraka ny resaka famerenana ireo Nosy malagasy amin’i Madagasikara ho fampiharana ny fehin-kevitry 34/91 tamin’ny 12 desambra 1979 izay noraisin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana sy ny fehin-kevitra 35/123 izay noraisin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana tamin’ny 11 desambra1980 ho fanamafisana ny famereran’ny governemanta frantsay ireo Nosy malagasy amin’i Madagasikara.
Ny fanafoanan’ny governemanta frantsay tsy misy hatak’andro ny didim-panjakana laharana 60-555 tamin’ny 1 aprily 1960 sy ny didim-panjakana laharana 78-146 tamin’ny 3 febroary 1978 ary Lalàna laharana 2007-224 tamin’ny 21 febroary 2007 izay milaza fa ireo Nosy malagasy dia tafiditra ho isan’ireo « îles antarctiques françaises » no vaha-olana tsotra indrindra amin’ny famerenana ireo Nosy ka hangatahan’ny ANM fiaraha-miasa amin’ireo Solombavam-bahoaka frantsay.
Manome toky antsika mpiray tanindrazana ny ANM fa hanao izay tratry ny heriny amin’ny famarenana ireo Nosy malagasy amin’i Madagasikara. Raha nisy mantsy ny fiaraha-mientan’ny rehetra dia efa tafaverina tamin’ity taona ity tamintsika malagasy ireo Nosy fananantsika ireo saingy misy ireo vitsy an’isa mamalan-kira. Manantena ny firaisan-kinantsika malagasy amin’izao fitakiana ny zo sy ny fananantsika ary fiarovana ny fiandrianam-pirenena izao mba hialana amin’ny fahantrana lalina izay mianjady amin’ny mpiray tanindrazana.
Natao, teto Antananarivo androany faha 08 desambra 2016
Filoha nasionalin’ny ANM